Ntuziaka ndị nne na nna na-akpali agụụ mmekọahụ na --ntanetị - wardgwọ
Home Blog akụkọ FREE Ntuziaka Ndị Nne na Nna na Intanet
adminaccount888 18th May 2021 Education, Health, Akụkọ kacha ọhụrụ
Nnyocha sitere na British Board of Class Class Film
Vidio ga-enyere aka kpuchido Ndị Na-eto Eto
Enyemaka na mkparịta ụka ndị ahụ siri ike
Ndụmọdụ kachasị elu maka ịgwa ụmụaka okwu
Ndụmọdụ kachasị elu banyere ekwentị
Kedu ngwa nwere ike inyere aka?
Ntinye Aka Gọọmentị
Nkwado ndị ọzọ sitere na Foundation Reward Foundation
Dị ka nne na nna na ndị na-elekọta ụlọ, ị bụ ezigbo ndị nlereanya na isi iyi nke nduzi maka ụmụ gị. Ntuziaka ndị nne na nna a na ịntanetị ga-enyere gị aka inwe obi ike iji nwee mkparịta ụka ndị ahụ siri ike. Mụta maka mmetụta ahụike na nke anụ ahụ nke egwu egwu, mmetụta mmekọrịta mmadụ na ibe ya, yana ihe metụtara iwu. Porn taa dị iche na porn nke oge gara aga banyere mmetụta ya na ụbụrụ.
N'oge oria ojoo a, enweghi ike ime ka otutu umuaka buru ihe mberede ma obu imewe ha, ihu udiri ihe nlere nke ndi gba ọtọ. Ọ gwụla ma ị kụziiri onwe gị, mgbe ahụ ụmụ gị (s), banyere mmetụta ndị nwere ike, mgbe ahụ enwere ihe egwu maka nwa gị ịmalite nsogbu metụtara porn n'ọdịnihu. Ndoo na adighi nma, mana nka bu eziokwu. Ndị na-eto eto bụ ndị na-enweghị ike ịmalite nsogbu ahụike ọgụgụ isi na ị addicụ ọgwụ ọjọọ na oge. Nke a bụ ezigbo obere video site na trauma psychiatrist na-ekwu maka ịnagide ọrịa a.
Isi nke Egwu Porns
Ihe na-akpali agụụ mmekọahụ nwere ike ịkpata mmetụta ndị na-esonụ:
Nnọpụga iche; nsogbu ọnọdụ uche; ebumnuche mmekọahụ nke ndị ọzọ; na-etinye aka na omume dị egwu ma dị egwu; ezigbo onye ọlụlụ; nsogbu mmekọahụ; ịkpọasị onwe onye, ​​ileghara akụkụ dị mkpa nke ndụ anya; iji ike egwu egwu, ị addictionụ ọgwụ ọjọọ.
Oge ntorobịa na-amalite n'ihe dịka afọ 10-12 ma dịgide ruo etiti afọ iri abụọ. N’oge a dị oke egwu ụbụrụ na - eto eto, ụmụaka na - ahụkwa oge agụmakwụkwọ dị ngwa. Ihe ọ bụla ha lebara anya na ọtụtụ ga-abụ ụzọ dị ike site na oge oge mmepe a na-ebelata. Ma site na oge obula, nwata bidoro nwewa oke ochicho banyere inwe mmekorita nwoke na nwanyi. N'ihi gịnị? N'ihi na ihe kachasị mkpa n'okike bụ ịmụ ụmụ, na-ebufe mkpụrụ ndụ ihe nketa. Emere anyi ka anyi tinye uche na ya, di njikere ma obu adighi, ma oburu na anyi achoghi. Internetntanetị bụ ebe mbụ ụmụaka malitere ịchọ azịza. Ihe ha choputara bu ihe nlere nke ihe nlere di egwu.
Tonweta n'efu, gụgharia, ihe nkiri gba ọtọ siri ike bụ otu n'ime nnwale nnwale mmekọrịta ọha na eze na-achịkwaghị achịkwa na akụkọ ntolite. Ọ na-agbakwunye ụdị omume ọhụụ dị egwu na ụbụrụ na-achọkarị egwu. Lee obere vidiyo a ka ị ghọtakwuo banyere ụbụrụ nwa na ndụmọdụ maka ndị nne na nna site na ọkachamara n'ọrịa.
Mụ nwoke na-ejikarị saịtị porn karịa ụmụ agbọghọ, ụmụ agbọghọ na-ahọrọ ebe nrụọrụ weebụ na-elekọta mmadụ ma nwee mmasị na akụkọ na-akpali agụụ mmekọahụ, dị ka 50 Shades nke Gray. Nke a bụ nsogbu dị iche maka ụmụ agbọghọ. Iji maa atụ, anyị nụrụ maka otu nwatakịrị nwanyị dị afọ 9 nke na-ebudata ma na-agụ akụkọ akụkọ banyere ya Kindle. Nke a bụ n'agbanyeghị na nne ya na-etinye mgbochi na njikwa na ngwaọrụ ndị ọzọ niile ọ nwere ohere ịnweta, mana ọ bụghị Kindle.
Ọtụtụ ndị na-eto eto na-ekwu na ọ dị ha ka nne na nna ha na-agbasi mbọ ike iso ha kwurịta ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ. Ọ bụrụ na ha enweghị ike ịrịọ gị maka enyemaka, ebee ka ha ga-aga?
Nnukwu weebụsaịtị na-ewu ewu Pornhub na-akwalite vidiyo ndị na-emepụta nchegbu dị ka ịkwa iko, ịkwa iko, mmekpa ahụ, ndina n'ike na gangbangs. Ezinaụlọ bụ otu n'ime ụdị ngwa ngwa kachasị dị ka Pornhub'akụkọ nke aka anyị. Ọtụtụ n'ime ya bụ n'efu ma dịkwa mfe ịnweta. Na 2019 naanị, ha buliri porn 130 'bara uru na vidiyo dị nde 6 dị iche iche. Enwere oge nde 7 kwa ụbọchị na UK. 20-30% nke ndị ọrụ bụ ụmụaka n'agbanyeghị na ihe nkiri ndị gba ọtọ na-eme dị ka ntụrụndụ okenye. Bụrụ ụmụaka enweghị ike ịnagide ụdị ike mmekọahụ nke ụlọ ọrụ dị otú ahụ na-enweghị mmerụ ahụ kpatara ahụike na mmekọrịta ha. Pornhub hụrụ oria a na-efe efe dị ka nnukwu ohere ijikọkwu ndị ọrụ ma na-enye ohere n'efu na saịtị ha (nke a na-akwụkarị ụgwọ) na mba niile.
Dabere na nke a research site na 2019, ụmụaka dị ka afọ 7 na 8 na-asụ ngọngọ gafee foto ndị gba ọtọ siri ike. Enwere nne na nna 2,344 na ndị ntorobịa na-esonye na nyocha a.
Ọtụtụ n'ime ndị na-eto eto oge mbụ ikiri ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ bụ ihe ọghọm, ihe karịrị 60% nke ụmụaka 11-13 bụ ndị hụrụ ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ na-ekwu na ikiri ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ bụ amaghị ama.
Describedmụaka kọwara na enwere "oke" na "mgbagwoju anya", ọkachasị ndị hụrụ ihe na-akpali agụụ mmekọahụ mgbe ha na-erughị afọ 10.
Ihe karịrị ọkara (51%) nke afọ 11 ruo 13 kọrọ na ha ahụla ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ n'oge ụfọdụ, na-ebili na 66% nke 14-15 afọ.
83% nke ndị nne na nna kwenyere na njikwa nyocha afọ ga-adị maka ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ n'ịntanetị
Akụkọ ahụ gosipụtara ọdịiche dị n'etiti echiche ndị nne na nna na ihe ụmụaka na-ahụ n'ezie. Atọ n'ụzọ atọ (75%) nke ndị nne na nna chere na nwa ha agaghị ahụ foto ndị gba ọtọ n'ịntanetị. Ma n'ime ụmụ ha, ihe karịrị ọkara (53%) kwuru na ha n'ezie hụrụ ya.
David Austin, Chief Executive nke BBFC, kwuru, sị: “Ihe na-akpali agụụ mmekọahụ bụ otu ụzọ ọpụpụ maka ụmụaka nke afọ niile na UK, nyocha a na-akwado ọtụtụ ihe akaebe na-egosi na ọ na-emetụta ụzọ ndị na-eto eto si aghọta mmekọrịta dị mma, mmekọahụ, ahụ mmadụ na nkwenye. Nnyocha ahụ gosikwara na mgbe ụmụaka - mgbe ụfọdụ dị ihe dị ka afọ asaa ma ọ bụ asatọ - buru ụzọ lee foto ndị gba ọtọ na ntanetị, ọ bụchaghị n'ebumnuche. ”
Imirikiti ụmụaka na ndị nne na nna gbara ajụjụ ọnụ kwenyere na nyocha nke afọ ga-egbochi ụmụaka ịlele ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ na nwata mgbe ha ka dị obere, na ọ nwere ike igbu oge afọ ha gosipụtara ya.
83% nke ndị nne na nna nyochara kwetara na e kwesịrị inwe njikwa nyocha afọ na ebe maka ịntanetị. Nnyocha ahụ gosikwara na ndị na-eto eto chọrọ nkwenye afọ - 47% nke ụmụaka chere na nyocha afọ bụ ezigbo echiche, yana ụmụ afọ 11-13 nwere ihu ọma karịa ndị na-eto eto toro eto.
Vidio ga-enyere aka ichebe ndị na-eto eto
Nkeji 2 a, na-enwu gbaa -aga aga na-enye nyocha ngwa ngwa ma na-akwado mkpa dị ngwa maka mmejuputa iwu nyocha afọ iji chebe ụmụaka. I nwekwara ike igosi ya ụmụ gị n’ihi na o nweghị ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ.
Nke a 5-nkeji video bụ ihe e dere na otu ihe nkiri si na New Zealand. N'ime ya, neurosurgeon na-akọwa ihe ị addictionụ ọgwụ ọjọọ na-adị ka ụbụrụ ma na-egosi otú o si yie ị addictionụ ọgwụ ọjọọ.
N'ime okwu TEDx a “Mmekọahụ, Porn na Nwoke“, Prọfesọ Warren Binford, na-ekwu okwu dị ka nne na onye nkụzi nwere nchegbu, na-enye nkọwa dị mma banyere etu porn si emetụta ụmụaka. Okwu TEDx a nke Prọfesọ Gail Dines kwuruNa-etolite na omenala egwu”(Nkeji 13) na-akọwa n’ ụzọ doro anya etu vidio egwu, saịtị ndị na-akpali agụụ mmekọahụ na soshal midia si akpụzi mmekọrịta ụmụaka anyị taa.
Nke a bụ okwu TEDx na-atọ ọchị (nkeji 16)Olee otú Porn Skews na-atụ Anya Mmekọahụ”Otu onye America mụrụ na onye na-akụzi banyere mmekọahụ Cindy Pierce. Ntuziaka ndị mụrụ ya na-ekwu ihe mere mkparịta ụka na-aga n'ihu na ụmụ gị banyere porn ji dị mkpa na ihe na-adọrọ mmasị ha. Lee n'okpuru maka akụrụngwa ndị ọzọ gbasara otu esi enwe mkparịta ụka ndị a.
Childrenmụaka ndị dị afọ isii na-ekiri ihe ndị gba ọtọ. Fọdụ ụmụaka na-adọrọ mmasị ma na-achọsi ike karịa, ndị ọzọ na-enwe mkpasasị uche ma nwee nrọ nrọ. Ihe siri ike nke tozuru etozu adabaghị maka ụmụaka afọ ọ bụla n'ihi ogo ogo ụbụrụ ha. Nke a bụ akụkọ emelitere na 2017 a na-akpọ "… Amaghị m na ọ bụ ihe dị mma ikiri…" nyocha nke qualitative na ọnụọgụ nke mmetụta nke ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ n'ịntanetị na ụkpụrụ, omume, nkwenkwe na akparamàgwà nke ụmụaka na ndị na-eto eto. " Ndi NSPCC na Kọmishọna Childrenmụaka maka England na Wales nyere ya ọrụ na Mahadum Middlesex.
Lezie anya otú o si esiri ndị nọ n’oge uto ike ijide onwe ha. Nke a bụ ezigbo okwu TEDx nke onye ọka iwu na akparamàgwà akparamàgwà America Dan Ariely kpọrọ Okpomọkụ nke oge: Mmetụta nke Mkpali Mmekọahụ na Mkpebi Ime Mmekọahụ.
Akwụkwọ nke nne na nna maka ndị nne na nna gbasara mmetụta Porn na ụmụaka
Anyị na-akwado vidiyo a. Ị nwere ike lee ihe na-adighi adighi anya na Vimeo. Ọ bụ akwụkwọ akụkọ nke ndị nne na nna mere, ndị na-eme ihe nkiri, maka ndị nne na nna. Ọ bụ nyocha kachasị mma nke nsogbu anyị hụrụ ma nwee nnukwu ihe atụ nke otu esi enwe mkparịta ụka aghụghọ ndị ahụ na ụmụaka gị.
Lele vidiyo na-akpata ya na-akwụ ụgwọ naanị £ 4.99. Anyị anaghị enweta ego maka nkwanye a. Ọtụtụ ndị ọkachamara na akụrụngwa anyị kpọtụrụ aha na ntuziaka ndị nne na nna a na-egosi na akwụkwọ akụkọ ahụ. Rob na Zareen tinyere ego ha na nka ha niile n’ime ka nke a bụrụ ọrụ nye ndị nne na nna ndị ọzọ. Ọ bụrụ n’ịchọghị imefu ego ọbụla, enwere vidiyo ndị ọzọ magburu onwe ha n’okpuru dị n’efu.
Onye bụbu prọfesọ sociology, onye edemede na nne, Dr Gail Dines, bụ onye guzobere Culture Reframed. Ya na ndị otu ya ewepụtala n'efu, ngwa ọrụ kachasị mma nke ga - enyere ndị nne na nna aka ịzụlite ụmụaka na - eto eto. Otu esi enwe mkparịta ụka ahụ: lee Omenala Reframed Mmemme Ndị Nne na Nna.
2. Ihe a bu akwukwo Colette Smart, nne, onye nkuzi mbu na akparamaagwa nke a na-akpo “Ha Ga-adị Mma“. Akwụkwọ a nwere ihe atụ 15 nke mkparịta ụka gị na ụmụ gị nwere ike inwe. Weebụsaịtị ahụ nwekwara ụfọdụ ndị TV bara uru gbara ajụjụ ọnụ yana onye ode akwụkwọ na-ekenyekwa ụfọdụ echiche dị mkpa.
“Atala ụta na ihere” nwatakịrị maka ikiri ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ. Ọ bụ ebe niile na ntanetị, na-apụta na mgbasa ozi mmekọrịta na vidiyo vidiyo. O nwere ike isi ike izere. Mụaka ndị ọzọ nyefere ya maka ịchị ọchị ma ọ bụ nkwuwa okwu, ma ọ bụ nwa gị nwere ike sụọ ngọngọ na ya. Ha nwere ike na-achọsi ya ike. Naanị igbochi nwa gị ile ya anya na-eme ka ọ bụrụ ọnwụnwa, n'ihi na dịka okwu ochie si kwuo, 'mkpụrụ osisi a machibidoro iwu na-atọ ụtọ karịa'.
Debe ahịrị nke nkwurịta okwu emeghe nke mere na ị bụ ọdụ ụgbọ mmiri mbụ ha iji kwurịta nsogbu gburugburu porn. Naturallymụaka na-achọkarị ịmata banyere mmekọahụ site na nwata. Online porn dị ka ụzọ dị mma iji mụta otú e si enwe ezigbo mmekọahụ. Na-emeghe ma na-eme ihe n'eziokwu banyere echiche gị banyere ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ. Chee echiche banyere ikwupụta onwe gị na porn dị ka onye na-eto eto, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ọ naghị adị gị mma.
Don'tmụaka achọghị otu nnukwu okwu gbasara mmekọahụ, ha chọrọ ọtụtụ mkparịta ụka oge na-aga ka ha na-eto eto. Onye ọ bụla ga-abụ afọ kwesịrị ekwesị, rịọ maka enyemaka ma ọ bụrụ na ịchọrọ ya. Ndi nna na ndi nne ha abụọ kwesiri ịrụ ọrụ n'ịkụziri onwe ha na ụmụ ha banyere mmetụta nke teknụzụ taa.
Na-eme mkpesa: Kidsmụaka nwere ike ime ngagharị iwe na mbido, mana ọtụtụ ụmụaka agwala anyị na ha ga-achọ ka ndị mụrụ ha mee ka ha na-enye ha iwu wee nye ha iwu doro anya. Naghị eme nwa gị ihe ọma site na ịhapụ ha 'n'ụzọ nkịtị' na atụmatụ ha.
Ewela iwe maka iji obi ike na ụmụ gị na-eme ihe. Ahụ ike ha na ahụike ha nke ukwuu dị n'aka gị. Were onwe gi ihe omuma na obi ghere oghe nyere nwa gi aka igbafe oge nsogbu a. Nke a bụ nnukwu ndụmọdụ site na nwa ogwu nwa na ekwu okwu banyere nsogbu ikpe.
-adịbeghị anya research na-egosi na nzacha naanị agaghị echebe ụmụ gị ịnweta foto ndị gba ọtọ n'ịntanetị. Ntuziaka ndị nne na nna a na-ekwusi ike mkpa ọ dị ime ka ụzọ nkwurịta okwu ghere oghe ka ọ dị mkpa. Ime ka porn sie ike ịnweta ọ bụ ezie na ọ bụ mmalite dị mma ọkachasị ụmụaka. Ọ bara uru itinye ya nzacha na ngwaọrụ intaneti niile na nyocha na a mgbe niile na ha na-arụ ọrụ. Lelee Childline ma ọ bụ onye na-ahụ maka ịntanetị gị gbasara ndụmọdụ kachasị ọhụrụ banyere nzacha.
Na-egbu oge inye nwa gị ama ma ọ bụ mbadamba n'ihi na dị ka ogologo oge o kwere omume. Ekwentị mkpanaka pụtara na ị nwere ike ịnọ na kọntaktị. Ọ bụ ezie na ọ nwere ike ịdị ka ụgwọ ọrụ maka ịrụsi ọrụ ike na ụlọ akwụkwọ praịmarị ma ọ bụ ụlọ akwụkwọ elementrị iji gosi nwata gị ekwentị nwere ike ịbanye na ụlọ akwụkwọ sekọndrị, lelee ihe ọ na-eme iji nweta agụmakwụkwọ ha na ọnwa ndị na-esote. Childrenmụaka ọ chọrọ n'ezie ịntanetị 24 kwa ụbọchị? Ọ bụ ezie na ụmụaka nwere ike ịnata ọtụtụ ihe omume ụlọ akwụkwọ dị n'ịntanet, enwere ike ịme ihe ntụrụndụ na minit 60 kwa ụbọchị, ọbụlagodi nnwale? Enwere ọtụtụ ngwa iji nyochaa ojiji ịntanetị karịsịa maka nzube ntụrụndụ. 2mụaka ndị dị afọ XNUMX na n'okpuru ekwesịghị iji ncha.
Gbanyụọ ịntanetị n'abalị. Ma ọ bụ, ma ọ dịghị ihe ọzọ, wepu ekwentị, mbadamba na ngwaọrụ egwuregwu site na ime ụlọ nwa gị. Enweghị ụra mweghachi na-amụba nrụgide, ịda mbà n'obi na nchekasị n'ọtụtụ ụmụaka taa. Ha chọrọ ihi ụra abalị, abalị asatọ ma ọ dịkarịa ala, iji nyere ha aka itinye aka na mmụta ụbọchị ahụ, nyere ha aka ito eto, nwee mmetụta nke mmetụta uche ha ma nwee ahụ ike.
Nam nditọ fo ẹfiọk oro e mere porn site na ijeri ijeri dollar ụlọ ọrụ ntanetị iji "nko" ndị ọrụ n’amaghị ama na-etolite omume nke na-eme ka ha laghachite ọzọ. Ihe niile gbasara idebe ha. Ndị ụlọ ọrụ na-ere ma na-ekerịta ihe ọmụma miri emi banyere ọchịchọ na omume onye ọrụ na ndị ọzọ na ndị mgbasa ozi. A na-eme ya ka ọ bụrụ ihe na-eri ahụ dị ka egwuregwu n'ịntanetị, ịgba chaa chaa na mgbasa ozi mmekọrịta iji mee ka ndị ọrụ laghachi azụ maka ozugbo ha gwụrụ ma ọ bụ nwee nchekasị. Chọrọ ka ndị isi ihe nkiri ihe nkiri na-akpali agụụ mmekọahụ na-akụziri ụmụ gị banyere mmekọahụ?
Enwere ọtụtụ ngwanrọ na nhọrọ nkwado. Ikydz bụ ngwa na-ekwe ka ndị nne na nna nyochaa ha ụmụaka 'ojiji. Osisi Nche na-agwa ndị nne na nna mgbe ihe oyiyi enyo pụtara na ngwaọrụ ụmụ ha. Ọ na-ekwu banyere ihe egwu dị na ozi gbasara izigara mmadụ ozi.
oge bụ a free ngwa nke na-enye mmadụ ohere ileba anya n'iji ya eme ihe n'ịntanetị, setịpụrụ oke ma nata nudges mgbe ọ ruru oke ndị ahụ. Ndị ọrụ nwere ọchịchọ ilelị ojiji ha ji oke akụkụ. Ngwa a yiri nke a ma ọ bụghị n'efu. Ọ na - enyere ndị mmadụ aka ịmaliteghachi ụbụrụ ha n’enyemaka n’ụzọ. A na-akpọ ya Brainbuddy.
Ndị a bụ ụfọdụ mmemme ndị ọzọ nwere ike ịba uru: Anya Agba Ọhụrụ; Ogbugbo; NetNanny; Mobicip; Njikwa Nne na Nna Qustodio; WebWatcher; Norton Family Premiere; OpenDNS VIPlọ VIP; PureSight Multi. Ngosipụta nke mmemme na ndepụta a abụghị nkwado site na Regwọ Ọrụ .gwọ. Anyị anaghị enweta uru ego site na ahịa nke ngwa ndị a.
Akwụkwọ kacha mma n'ahịa bụ onye ọrụ nyocha anyị na-asọpụrụ bụ Gary Wilson. Anyị ga-ekwu nke ahụ, mana ọ na-abụ eziokwu. A na-akpọ ya “Brain gị na Porn: Internet Pornography na Science Emerging of Addiction”. Ọ bụ ezigbo ndu ndị nne na nna. Nye ya ụmụ gị ka ha gụọ dịka o nwere ọtụtụ narị akụkọ ndị ọzọ na-eto eto na mgba ha na porn. Ọtụtụ malitere ile porn ịntanetị na nwata mgbe ha sụrụ ngọngọ na mberede.
Gary bụ ezigbo onye nkụzi sayensị na-akọwa ụgwọ ọrụ ụbụrụ, ma ọ bụ mkpali, n'ụzọ dị mfe maka ndị na-abụghị ndị sayensị. Akwụkwọ bụ mmelite na ewu ewu ya TEDx kwuo okwu site na 2012 nke nwere ihe karịrị nde 14.
Akwụkwọ a dị na mpempe akwụkwọ, na Kindle ma ọ bụ dịka akwụkwọ ọdịyo. N'ezie ụdị ọdịyo dị maka n'efu na UK Ebe a, na maka ndị nọ na USA, Ebe a, dabere na ọnọdụ ụfọdụ. Emegharịrị ya na Ọktọba 2018 iji tụlee etu thetù Ahụ Ike Worldwa si amata ụdị nyocha ọhụụ nke “Nsogbu Ọjọọ Na-agwụ Ike“. Ntughari di na Dutch, Russian, Arabic, Japanese na Hungarian ruo ugbu a, ya na ndi ozo di na mmanu. Asụsụ German ga-apụta na Mee 2021.
Tọgharia Brain Nwa Gị
Nwa akwukwo banyere oria uche umuaka Dr Victoria DunckleyTọgharia Brain nwa gị”Na ya free blog kọwaa mmetụta nke oke oge ihuenyo na ụbụrụ nwatakịrị. N'ụzọ dị oke mkpa ọ na-esetịpụ atụmatụ maka ihe ndị nne na nna nwere ike ime iji nyere nwa ha aka ịmaliteghachi na egwu ọzọ.
Dr Dunckley anaghị ewepu iji egwu porn mana ọ na-elekwasị anya na ịntanetị n'ozuzu ya. Ọ na-ekwu na ihe dịka 80% nke ụmụaka ọ hụrụ anaghị enwe nsogbu ahụike ọgụgụ isi nke achọpụtarala ma gwọọ ha, dị ka ADHD, ọrịa bipolar, ịda mba, nchekasị wdg, kama ha nwere ihe ọ kpọrọ 'kọmputa' '' Ọrịa a na-emetụta mgbaàmà nke ọtụtụ n'ime nsogbu ahụike ọgụgụ isi nkịtị. Enwere ike ịgwọ / belata nsogbu ahụike ọgụgụ isi site na iwepu ngwaọrụ elektrọnik oge nke ihe dị ka izu 3 n'ọtụtụ oge, ụfọdụ ụmụaka chọrọ ogologo oge tupu ha amaliteghachi iji ya mana na ọkwa dị oke ala.
Akwụkwọ ya na-akọwakwa otu ndị nne na nna nwere ike isi mee nke a na ntuziaka ndị nne na nna site na nkwado nke ụlọ akwụkwọ nwatakịrị ahụ iji hụ na mmekọrịta kachasị mma n'akụkụ abụọ.
Ọkammụta ọkachamara n'ihe gbasara mmekọrịta mmadụ na ibe ya bụ Prọfesọ Philip Zimbardo na Nikita Coulombe mepụtara ọmarịcha akwụkwọ akpọrọ Akwụsịre mmadụ banyere ihe kpatara ụmụ okorobịa ji agba mgba taa na ihe anyị nwere ike ime maka ya. Ọ na-agbasa ma na-emelite okwu TED a na-ewu ewu nke Zimbardo "Demise of Guys". Dabere na nyocha siri ike, ọ na-akọwapụta ihe kpatara ụmụ nwoke ji agụ akwụkwọ na agụmakwụkwọ na-adighi ike na mmekọrịta ha na ụmụ nwanyị.
Akwụkwọ maka ermụaka Na-eto Eto
“Igbe Pandora na-emeghe. Ugbu a gịnị ka m ga-eme? ” Gail Poyner bụ ọkà n'akparamàgwà mmadụ ma na-enye ụbụrụ bara uru na omume dị mfe iji nyere ụmụaka aka iche echiche site na nhọrọ.
"Ezigbo Foto, Foto Ọjọọ”Nke Kristen Jensen na Gail Poyner dere. Nakwa ezigbo akwụkwọ na-elekwasị anya n'ụbụrụ nwa.
Ọ bụghị maka Kidsmụaka. Ikpuchido Kidsmụaka. Liz Walker edeela akwụkwọ dị mfe maka ụmụaka na-eto eto nwere eserese mara mma.
Hamish na onyinyo nzuzo. Nke a bụ akwụkwọ ọhụrụ nke Liz Walker dere maka ụmụaka gbara afọ 8-12.
Bara Uru weebụsaịtị
Mụta banyere ahụ ike, iwu, agụmakwụkwọ na mmekọrịta mmetụta nke ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ na-eji Ụgwọ Ọrụ Ụgwọ weebụsaịtị yana ndụmọdụ na ịgbara ya ọsọ,.
Hụ otú Omenala Mmemme Ndị Nne na Nna na-enyere ndị nne na nna aka ịnagide mgbanwe ọdịbendị dị ugbu a na mmetụta ha na ụmụaka.
Ghọta otú mmega ahụ nwere ike isi bụrụ njikpa onwe. Ọchị video site n'elu ọkà n'akparamàgwà mmadụ.
Onye na-eme enyi na-emebi omume mmekọahụ ngwa ngwa site na Lucy Faithfull Foundation.
Ndụmọdụ dị mma sitere na ọrụ ebere na-emejọ ụmụaka na-akwụsị ya ugbu a! Ndị nne na nna Chebe
Lụọ Ọgwụ Ọgwụ Ọhụrụ Otu esi agwa ụmụ gị okwu banyere porn.
Nke a bụ ihe ọhụrụ dị mkpa akụkọ si Okwu Internetntanetị on internet nchekwa na dijitalụ paireti na Atụmatụ na-esi na-echebe nwa gị mgbe sọọfụ ụgbụ.
Ndụmọdụ sitere na NSPCC banyere porn online.
Iweghachite weebụsaịtị maka ndị na-eto eto
Ọtụtụ n'ime ndị isi free mgbake weebụsaịtị dị ka yourbrainonporn.com; RebootNation.org; PornHelp; NoFap.com; Fightthenewdrug.org; Gaa Maka Ọdịnihu na Ịntanetị na-eme ihe ngosi bụ ndị na-ejighị okpukpe kpọrọ ihe mana ha nwekwara ndị ji okpukpe kpọrọ ihe. Ọ bara uru ka ndị nne na nna lelee anya iji mata ihe ndị gbakere mgbake nweela ma na-anagide ugbu a ka ha na-agbanwe.
Okwukwe dabere na ya
Enwere ezigbo akụrụngwa maka obodo ndị nwere okwukwe dịka Aghachitere Iguzosi Ike n'Ezi Ihe maka ndị Katọlik, maka Ndị Kraịst n'ozuzu Ezigbo Nri Project (UK) Olee otú Porn Mmebi (US), na Ndokwa Muslim maka ndị okwukwe Alakụba. Biko kpọtụrụ anyị ma ọ bụrụ na e nwere ọrụ okwukwe ndị ọzọ anyị nwere ike ịbanye.
Okwu ndị metụtara iwu
Childrenmụaka na-eji ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ na ịntanetị eme ihe mgbe nile ka ọ na-emetụta ụbụrụ nwatakịrị ahụ, agụụ mmekọahụ nke agụụ mmekọahụ. Ọ nwere mmetụta dị ukwuu na mmekọahụ na ịntanetị. Nchegbu a na-enwe maka ndị nne na nna kwesịrị ịbụ mmetụta metụtara iwu nke nwa ha nwere ike ịmalite iji ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ na-akpata nsogbu na-akpata omume mmekọahụ na-emerụ ahụ n'ebe ndị ọzọ nọ. Nke a Page site na ttù Ọkachamara nke Gọọmentị Scottish họpụtara n'ime omume mmekọahụ na-emerụ ahụ n'etiti ụmụaka na-enye ihe atụ nke omume dị otú ahụ. Lee ebe a kwa maka ụfọdụ isi ozi gbasara sexting, ịbọ ọbọ porn wdg nke ndị uwe ojii na-ebo ebubo. Mmekọahụ na Scotland. Mmekọahụ na England, Wales na Northern Ireland.
Hụ ọrụ ebere ụmụaka na-emejọ ụmụaka Lucy Faithfull Foundation na-egbochi mgbochi omume mmekọahụ rụrụ arụ ngwa ngwa metụtara ndị nne na nna, ndị nlekọta, ndị ezinụlọ na ndị ọkachamara. A na-akpọ Foundationgwọ Ọrụ asgwọ dị ka isi iyi nke enyemaka.
Na UK, iwu chọrọ ka ndị uwe ojii rịba ama ihe ọ bụla metụtara mmekọahụ na sistemụ Criminal History nke ndị uwe ojii. Ọ bụrụ na nwatakịrị gị ejiri onyogho ndị na-adịghị mma nwude ya ma mee mmanye iji nweta ha ma ọ bụ nyefe ya ndị ọzọ, ndị uwe ojii nwere ike ibo gị ebubo. Ebe ọ bụ na ndị uwe ojii na-eleda mmejọ iwu anya nke ukwuu, mmejọ mmejọ ahụ, nke edere na sistemụ akụkọ ihe mere eme nke ndị uwe ojii, ga-enyefe onye na-achọ ọrụ mgbe a rịọrọ ka enwekwu ego maka ndị na-adịghị ike Nke a gụnyere ọrụ afọ ofufo.
Mmekọahụ nwere ike ịdị ka ụdị mmegharị nwoke na nwanyị adịghị njọ, mana ọ bụrụ na ọ na - eme ihe ike ma ọ bụ na - amanye mmadụ ma ọtụtụ na - eme ya, mmetụta ọ nwere nwere ike bụrụ ihe dị njọ, ogologo oge maka atụmanya ọrụ nwa gị. Pornographykpụrụ omume rụrụ arụ ndị a na-eme mgbe nile na-akpali omume ndị na-eto eto kwenyere na ọ dị mma i copyomi ha.
Ndị uwe ojii Kent ekwuola maka ịkwụ ndị nne na nna ụgwọ dị ka ndị na-ejide nkwekọrịta ekwentị maka mmekọahụ ọ bụla na-akwadoghị site na nwa ha.
Ọ bụrụ na ị nwere nwatakịrị a tụlere na ọ nọ na ụdịdị autism, ọ dị mkpa ka ị mara na nwa gị nwere ike ịnwe ihe egwu dị elu nke ikiri ihe na-akpali agụụ mmekọahụ karịa ụmụaka na-adịghị ahụkebe. Ọ bụrụ n ’ị na-enyo nwa gị nwere ike ịdị n’eluigwe, ọ ga-adị mma ka ị nweta ha enyocha ọ bụrụ na ọ kwe omume. Mụ okorobịa ọkachasị ASD ma ọ bụ mkpa mmụta mmụta pụrụ iche na-anọchite anya ya na ọnụ ọgụgụ maka mmejọ mmekọahụ. Ọ na-emetụta ma ọ dịkarịa ala 1-2% ndị mmadụ nke onu ogugu ndi mmadu n'ogo, amaghi otutu ebe, mana karia 30% nke nwatakịrị na-emejọ ụmụaka nọ n'ụdị dị iche iche ma ọ bụ nwee nsogbu mmụta. Nke a bụ akwụkwọ ọhụrụ banyere ahụmahụ otu nwa okorobịa. Kpọtụrụ anyị maka ịnweta akwụkwọ ma ọ bụrụ na achọrọ.
Ọrịa ụdịdị nke Autism bụ ọnọdụ nhụjuanya sitere na ọmụmụ. Ọ bụghị ọrịa nke ọgụgụ isi. Ọ bụ ezie na ọ bụ ọnọdụ a na-ahụkarị n'etiti ụmụ nwoke, 5: 1, ụmụ nwanyị nwekwara ike ịnwe ya. Maka ozi ndị ọzọ gụọ blọọgụ ndị a na porn na autism; akuko nne; na autism: ezigbo ma ọ bụ adịgboroja?, ma obu lee nke anyi ngosi na ya na ọwa YouTube anyị.
Nke a bụ nnukwu okwu maka ndị nne na nna ịnagide naanị ya ọbụlagodi na enyemaka ụlọ akwụkwọ. Gọọmentị UK nwere ọrụ iji chebe ndị kachasị ike na ọha mmadụ. Ebumnuche nke iwu nkwenye afọ mbụ (Nkebi nke 3 nke Digital Economy Act, 2017) bụ iji mee ka ụlọ ọrụ ndị na-akpali agụụ mmekọahụ azụmaahịa wụnye ngwanrọ nyocha nke afọ iji gbochie ohere site n'okpuru 18 afọ gaa na ebe nrụọrụ weebụ na-akpali agụụ mmekọahụ. Emebeghi iwu a, dika ezubere ya, obere oge tupu ntuli aka izugbe na 2019. Gọọmentị kwere nkwa iwu ọhụrụ nke ga-agụnye saịtị mgbasa ozi ọha na eze yana ebe nrụọrụ weebụ na-akpali agụụ mmekọahụ nke azụmahịa n'okpuru ọhụrụ Hargwọ Na-emebi Ihe n'ịntanetị mana nke ahụ anaghị atụ anya ịdị njikere ruo 2023-24. E kwuru ya n’okwu Nwanyị Nwanyị n’abalị iri na otu nke Mee 11. Nke a bụ ihe magburu onwe blog site n'aka onye ọkachamara na nchekwa ụmụaka na ntanetị nke na-akọwapụta atụmatụ dị ugbu a, ọkachasị adịghị ike ya. Ka ọ dị ugbu a, ndị nne na nna na ndị nlekọta kwesịrị ime ihe ha nwere ike ime, na nkwado nke ụlọ akwụkwọ, iji nyere aka duzie ụmụ ha iji ịntanetị eme ihe. Gbaa umu akwukwo ulo akwukwo ume ka ha jiri nke anyi free nkuzi atụmatụ na mmekọahụ na ịntanetị.
Anyi choro ka umuaka tolite inwe mmekorita chiri anya nke di nma, nke ihunanya. Lelee ihe a maa mma video, "Kedu ihe bụ ịhụnanya?" iji chetara anyị ihe ọ dị ka na omume.
Biko kpọtụrụ anyị ọ bụrụ na enwere mpaghara ọ bụla ịchọrọ ka anyị kpuchie n'okwu a. Anyị ga-emepe emepe ihe ndị ọzọ na weebụsaịtị anyị n'ime ọnwa ndị na-abịanụ. Debanye na e-akwụkwọ akụkọ anyị na-akwụ wardgwọ Akụkọ (na ụkwụ nke ibe) ma soro anyị na Twitter (@brain_love_sex) maka mmemme ọhụụ.
Ntuzi nke nne na nna ka emelitere ikpeazụ 18 May 2021